I-China yokufika entsha-iAluminiyam ikhokelele ezantsi enomthi obanzi webalona kunye noMboneleli | I-Pro Isibane
Ukufika okutsha-iAluminiyam ekhokelele ezantsi enokubona ngecala elibanzi
INDAWO YOKUQUKA CO., CO. uhlala enikela imizamo engenamkhawulo kuphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha. Isibane se-aluminium phantsi kwesibane, ukukhanya okubuyelwe kwakhona, ukukhanya kwezorhwebo kuyimveliso yethu esandula ukwenziwa kwaye kuthengiswa kwiimarike zehlabathi.
Sisebenzisa okusingqongileyo-enobungane kunye nezinto ezilungileyo ezisemgangathweni zokwenza i-aluminium ekhokelelweyo phantsi, ukukhanya okuphinda kwenziwe kwakhona, ukukhanya kwezorhwebo. Ke, kulungile ukusebenza ngokuzinzileyo kwaye kukhuselekile ngokupheleleyo kubasebenzisi. Ukongeza, ikakhulu iphawulelwe uyilo Olukhethekileyo, i-angle yomqala ebanzi, ubungakanani obuthandwayo kunye nokusebenziseka, ukufakwa kalula, ukuyenza isebenziseke kakhulu kwimihlaba emininzi kwaye ixabisekile.
Malunga nokufaka iZicelo
Phambi kokuba sazise imveliso yethu entsha ekhokelwe yialuminiyam phantsi, ukukhanya kwakhona kwimarike, iingcali zethu zenze uvavanyo oluninzi zaza zangqina ukusebenza kwazo kumacandelo ohlukeneyo. Ngokusekelwe kwiziphumo zovavanyo, inokusetyenziswa ikakhulu kwicandelo (s) lehotele ephezulu, ivenkile yokutyela, ivenkile yokuthenga, iofisi, ikhaya, nezinye. Siyakholelwa ukuba njengoko ukuthandwa kwayo kuqhubeka kusanda, ixabiso layo elifihliweyo liya kufunyanwa.
Ukuthembela kubuchwepheshe obuphambili, ubuchule obufanelekileyo kukhokelela kushishino ngoku kwaye sisasaza imveliso yethu kwihlabathi liphela. Ngokudibeneyo neemveliso zethu, iinkonzo zethu nazo zibonelelwa ukuba zibe kwinqanaba eliphezulu. Sinikezela ngokuthengisa kunye nokuphendula kwangaphambi kokuthengisa kunye neenkonzo zasemva kokuthengisa, ukuphumelela ukuthembela nokudumisa kwabathengi. Simisele iqela leengcali emva kokuthengisa elizimisele ukuphendula yonke imibuzo malunga neemveliso zethu kunye nemibuzo.
Ukufika entsha-iAluminiyam ekhokelele ezantsi nge-w ...
Umbaleko ngokuchasene nexesha! Ukuqinisekisa ukukhanya ...
Isibane sokukhanya, Spot Lighting, Led Spot, Makhe , Modern eziphephezelayo ukuKhanya , Cob Spot Light,